रुनुपर्छ कहिलेकाहिँ ! अनुसन्धान भन्छ, ‘रुँदा पनि फाईदा छ’ « Lokpath
२०७६, २५ माघ शनिबार ०२:१९
रुनुपर्छ कहिलेकाहिँ ! अनुसन्धान भन्छ, ‘रुँदा पनि फाईदा छ’
प्रकाशित मिति : २०७६, २५ माघ शनिबार ०२:१९
जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, चाहेजस्तो हुन्न जीवन ।
हो, जीवन सोचेजस्तै हुँदैन । तारा देवीको स्वरमा गुन्जने यो गित साँच्चै जिवन्त यसकारण छ, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, जीवन । त्यसैले जीवनका उकाली ओराली पार गर्दै जाँदा कति बाधा आउँछन् कि त अवरोध । तर ति सजिलै पार गर्न जब कठिनाई पर्छ । मानिस दुख्छ । उसलाई नराम्रो लाग्छ । यसपछि भने महिला र पुरुष विभाजित भएर आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्न थाल्छन् । हो, अधिकांश पुरुषहरु हत्तपत्त रुँदैनन् । मनमा गाँठो परेको कुरा धक फूकाएर भन्दैनन् । तर महिला रुन्छन् र मन शान्त पार्छन् ।
हुन पनि हो, हाँसेर जीवन चल्दैन । अनि रुन मन लाग्छ । डाँको छोडेर चिच्याएर सबै भँडास पोख्न मन लाग्छ । यस्तो बेलामा अक्सर छोरीहरु रोएर कराएर समस्या समाधान गर्छन् । तर छोराहरुलाई सिकाइएको छ, तिमिहरु रुनु हुँदैन । रोएर कसरी चल्छ रु उनीहरु रुँदैनन् । मनको पीडा मनमै गढेर बस्छ तर अनुसन्धानले देखाएको छ रुँदा धेरै फाइदा हुन्छ । हुन त किताब पढ्दा, मूभि हेर्दा पनि रुनेहरु उत्तिकै छन् । स सानो ईमोशनल कुरामा पनि कोही मानिस छिटै रुन्छन् ।
रुँदा आँखाको शक्ति बढ्छ ।
आँसु आउँदा आँखाको नानी चिसो हुन्छ । यसले गर्दा आँखामा लचकता आउँछ र आँखाको शक्ति र चमक बढ्छ ।
आँखाको किटाणु हटाउँछ आँसुमा लिसोजाइमक नामको तरल पदार्थ हुन्छ जसले किटाणु हटाउँछ । यसले आँखामा भएका व्याक्टेरियाहरु ५ देखि १० मिनेटमा ९५ प्रतिशतसम्म हटाउँछ ।
रुनु तनाव भगाउने सबैभन्दा उत्तम तरीका हो । यदि तपाई तनावमा हुनुहुन्छ र त्यसलाई दूर गर्न सकिरहनु भएको छैन भने तपाईको मनमा नकरात्मक कुराले बढी स्थान लिन्छ । त्यसलाई रोएर नै पाखा लगाउनुहोस् ।
विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छ । रुँदा विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छ । जब मानिस दुःखमा हुन्छ तब शरीरमा विषाक्त पदार्थ पैदा हुन्छन् । अनि मानिस रुन्छ, आँसु सँगै त्यस्ता विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छ । त्यसैले रोएपछि मानिसले हल्का महसुस गर्दछ ।
सोंच राम्रो हुन्छ, रुँदा सोंच राम्रो हुन्छ । हाम्रो शरीरमा म्यान्निज बढी हुँदा थकाइ, रीस, हडबडाहटजस्ता समस्या देखा पर्दछन् । तर रुँदा शरीरमा म्याग्निजको मात्रा कम हुन्छ जसले गर्दा राम्रो सोंच आउँछ । र, मानिसले स्फूर्तिको महसुस गर्दछ ।
रुनु भनेको तनाव कम गर्ने उपाय पनि हो । तनाव हुँदा शरीरमा एन्डोफिर्न, ल्युकाइन– एन्काफालिन तथा प्रोल्याक्टिनजस्ता तत्व बढ्न जान्छन् । तर रुँदा त्यस्ता तत्व घट्ने भएकोले तनाव कम हुन्छ ।
जो व्यक्ति रुन्छन्, त्यस्तालाई कहिल्यै पनि कमजोर सोच्नुहुँदैन । किनकी उनीहरुको मन सफा हुन्छ ।
एकानब्बे (९१) महत्वपूर्ण टिप्सहरु !